Namoonni jimaa Ameerikaa seensisuufi raabsuu irratti bobba’an jedhaman mana murtee New York tti dhihaatan - Walabu Media | Oromo News & Opinions
Home Diinagdee Namoonni jimaa Ameerikaa seensisuufi raabsuu irratti bobba’an jedhaman mana murtee New York...
Namoonni jimaa Ameerikaa seensisuufi raabsuu irratti bobba’an jedhaman mana murtee New York tti dhihaatan
Namoonni kudha torba (17) sadarkaa addunyaatti daldala jimaa (caatii) geggeessaa turan jedhamanii kana dura too’annaa poolisii jalagalan jimaata dabre mana murtii magaalaa New York tti dhihaatan. Namoonni kunniin kan qabamanii mana murteetti dhihaataniif jimaa seeraanala gara Ameerikaatti seensisuufi raabsuu, akkasumas maallaqa doolaara kuma heddutti laakkayamu karaa dhoksaan Ameerikaa keessaa baasuu himannaa jedhuun. Akka himannaan dhihaate addeessetti, namoonni kunniin jimaa magaalaa New York fi Massachusetts keessatti gurguraa turan. Jimaa Ameerikaa seensisuunis ta’e gurguruun dhoorgamaadha.
Akka himannaan abbaa alangaa agarsiisutti namoonni kunniin itti gaafatamaa isaanii, Yadataa Bakrii Ingiliiz kan jiraatu, woliin ta’uun jimaa biyyoota Itoophiyaa, Keeniyaafi Yaman irraa seensisaa turan. Gareen kuni jimaa Chaayinaa, Ingiliiz, Hoolaandfi Beeljiyem irraa poostaan gara Ameerikaatti ergaa turuu isaaniiti himannaan kuni kan ifa godhe. Maallaqni gurgura jimaa irraa argames Dubaayii keessaan gara Yaadataa Bakriitti ergamaa kan ture ta’uu isaati kan ibsame.
Poolisiiin namoota jimaa Ameerikaa seensisuufi raabsuu irratti bobba’an jedhe kanniin nannoo woggaa tokkoof meeshaalee basaasaatti dhimma bahuun hordofaa turuu isaati kan ibse. Himannaan namoota kanniin irratti baname mana murteetti mirkanaaye taanaan, worri mataa daldala jimaa kanaa jedhamanii himataman, adabbii hanga umrii guutuun adabamuun akka maluudha kan the Guardian gabaase. Abokaatonni Yaadataafi kanniin isa woliin himatamanii, himannaa abbaan alangaa maamiloota isaanii irratti dhihesse irratti wanti dubbatan ammatti kan hinjirre ta’uudha kan gabaafame.
Jimaan biyyoota Awrooppaafi Amerikaa heddu keessatti dhoorgameera. Biyyoonni jimaa dhoorgan kunniin sababa jimaa dhoorganiif qeeqamuu jalaa hinabaane, garuu. Heduun isaan kan qeeqamaniif tankaarfii jimaa nyaachuufi daldaluu seera dhabessa godhu kana kan fudhatan miidhaa fayyaafi hawaasummaa jimaan fidu osoo qajeelatti hin hubatin fudhatan waan jedhuun. Mootummaan osoo aadaafi jireenya hawaasa Gaanfa Aafrikaa irraa dhufee xiyyeeffannaa keessa hingalchin jimaa tarree dawaa sammuu nama hadoochuu seensisuun, san irratti hundaayanii namoota yakkuufi adabuun, sirri miti jedhu qeeqxonni tankaarfii mootummoota jimaa dhoorganii. Woggaa dabre keessa koreen Dhimma Haajaa Biyyakeessaa paarlaamaa Britaaniyaa Guddittii adeemsa jimaa seera dhabsiisuu qeeqee ture; tankaarfiin jimaa irratti fudhatame ragaafi qorannoo irratti hin hundoofne jechuun.
Mootummoonni daldala jimaa dhoorgan sababni guddaan isaan dhiheessan maallaqani daldala jimaa irraa argamu gara kiisa Al-Shabaab fa’atti dhangala’a jedhu. The Guardian
Previous articleDhimmoota kanniin irratti hojjadhaa; sammuun niqarooma, abshaalummaan nidabala
Next articleBaqattoonni Itoophiyaa 16 Zaambiyaa keessatti too’annaa jala oolan